Geedka canjiga ah ee xilliga dayrta | February 2020
Ugu Weyn Ee Geedka canjiga ah ee xilliga dayrta
Barashada canab lagu beeray gooynta dayrta
Canabku waa dhaqan qaas ah oo la wada isticmaalo ma aha oo kaliya cusub, laakiin sidoo kale waxaa loo adeegsadaa diyaarinta macmacaanka, saladhyada, karinta, casiirka iyo, dabcan, nooc kasta oo khamri ah. Waxaa jira noocyo badan oo dhaqan ahaan ah. Waxay ku kala duwan yihiin dhadhanka, midabka berry iyo baaxadda codsiga. Si aad u dhadhamiso, canabku waxay u qaybsan yihiin sida caadiga ah, bidix, xawaash iyo isabel.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Geedka canjiga ah ee xilliga dayrta 2020